Lacagta Waxbarashada Bilaashka ah
RESPs Way Fududaysay Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada) Deeqda Dhigaalka Waxbarashada Canada Deeqaha Gobolka
DIYAAR BAAN AHAY!
Bondka Waxbarashada Kanada
Waxaad heli kartaa illaa $2,000 oo ah lacag waxbarasho bilaash ah …TAASINA WAA XAQIIQ! Waxa kaliya ee lagaaga baahan yahay waa adiga oo furta Qorshaha Ukeydiska Waxbarashada Diiwaangashan (RESP). Qasab kuguma aha inaad lacagtaada galiso qorshaha si aad lacagtan uga hesho Dowladda Kanada. Markaad furato RESP, Dowladda ayaa ayaa kuu dhigi doonta $500 isla markaaba oo kuu keydin karta illaa $1,500 oo dheeraad wakhtiga u ilmahaagu noqdo 15 jir. Taas waa illaa $2,000 oo loogu talagalo waxbarashada ilmahaaga waxa ka dambeeya dugsiga sare.
Ilmahaagu ma heli karaa Bondka Waxbarashada Kanada?
Ilmahaaga ayaa heli kara Bondka Waxbarashada Kanada haddii u ilmahaagu dhashay Janawari 1, 2004 ama wixii ka dambeeyay.
Maantaba u hel Bondka Waxbarashada Kanada ee ilmahaaga!
Sideen ku helaa Bondka Waxbarashada Kanada Ilmahayga?
Si aad u hesho Bondka Waxbarashada Kanada waa inaad ka bilowdo koontada qorshaha (RESP) bixiye RESP oo sharciyeysan oo ay Dowladduu lacagta u dhigi karto. Adiga iyo ilmahaaguba waxaad u baahan tihiin inaad lahaataan Lambarka Ceymiska Bulshada si aad iskaga diiwaangalisaan.
Maxaa looga dan leeyahay?
Bondka Waxbarashada Kanada ayaa kaliya loo isticmaali karaa waxbarashada dugsiga sare waxa ka dambeeya. Ilmahaagu waa inuu ISTICMAALAA AMA WAAYAA! Haddii uu ilmahaagu sii wadan waayo waxbarashada waxa ka dambeeyaa dugsiga sare, Dowladda ayaa dib ula noqon doonta Bondka Waxbarashada Kanada.
Macluumaad dheeraad ah ayaad ka heli kartaa buroshuurka Bondka Waxbarashada Kanada ee Dowladda
Xitaa haddii uuna ilmahaagu uqalmin Bondka Waxbarashada Kanada, wali waxaad uga heli kartaa Dowladda lacag loogu talagalay waxbarashada ilmahaaga. Wax ka ogow arrimaha ku saabsan Deeqda Ukeydsiga Waxbarashada Kanada.